ညမင်းသား: ရင်သား ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်များ တွင်သွေးဖောက်စစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်လာနိုင်တော့မည်။
ရင်သား ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်များ တွင်သွေးဖောက်စစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်လာနိုင်တော့မည်။
Texas ရှိသူသေတန ပညာရှင်များမှ မကြာမီတွင် ရင်သားကင်ဆာရောဂါ အတွက် သွေးဖေါက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင် June လ ၆ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်.
အဆိုပါ CTC ( Circulating Tumour Cells ) များကိုသွေး ထဲတွင်တိုင်းတာ ကာ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာ သည်များဧ။် ရောဂါနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကို ကြိုတင်ခတ်မှန်းသိရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရင်သားကင်ဆာရောဂါသည် ပြန်ရေကြော စနစ်( Lymphatic System) မှအဓိက ပြန့်နှံလေ့ရှိပြီး ထိုပြန့်နှံ့မှုကြောင့် ပင်ကုသမှုယူုပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းများ (Relapse ) ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်သောရောဂါမျိုးဖြစ်သည်။
ယခု လေ့လာချက်များအရ အရောဂါအစောပိုင်း၌ သွေးထဲတွင် CTC မြင့်တက်နေသော ရောဂါဝေဒနာ ရှင်များသည် နဂို ရောဂါဝေဒနာရှင်များ ထက်ပြန့်နှံ့မှုပိုမိုများပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်. ။
ထိုသို့ သောရောဂါဝေဒနာ ရှင်များအနေဖြင့် Lymph Node ဖယ်ထုတ်ထားပါက ပိုမို၍ အကျိုးရှိနိုင်ကြောင်း Professor Anthony Lucci မှ သုံးသပ်ပြခဲ့သည်။
အစားမလျှော့ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန် *************...
ရင်သား ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်များ တွင်သွေးဖောက်စစ်ဆေး...